ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ လူနှစ်ယောက် - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ လူနှစ်ယောက်
Posted by ukkmaung on August 14, 2016 at 12:21pm
ကျွန်တော် လူ၂ယောက်ကို ဧည့်လမ်းညွှန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလန်က သားအမိပါ။ အမေက ၇၂ နှစ် , သား ၅၀ နှစ်။ သူတို့တွေက အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ခံယူထားသူတွေပါ။ သက်သတ်လွတ်ပဲ စားတယ်။ နေ့တိုင်း တရားထိုင်တယ်။ သတ္တဝါလေးတွေကို လည်း သနားတတ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို လာခဲ့တာ အမေရဲ့ (၇၂) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကျင်းပချင်လို့ပါတဲ့။ ဒီမှာလို ဘိုဆန်ဆန် ဟက်ပီးဘတ်ဒေးတူးယူ မလုပ်။ ဖယောင်းတိုင်မီး မှုတ်ပြီးလည်း ဂုဏ်မယူ။
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ တွေ့တွေ့ချင်း . . .
“ရွှေတိဂုံဘုရားကို လေယာဉ်ပေါ်က ဖူးရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လူလာဖြစ်ရတာ နင်တို့ အရမ်း ကံကောင်းတယ်။”
သူတို့ပြောမှပဲ အနီးနားမှာ ရှိပြီး တန်ဖိုးထားရ ကောင်းမှန်း မသိ။ နီးလျှက်နဲ့ ဝေးနေခဲ့တယ်။
“ငါတို့ဟိုတယ်မသွားခင် ရွှေတိဂုံဘုရား အရင် ဖူးချင်တယ်။”
ပြည်လမ်းမပေါ်မှာ ကားခဏရပ်ပေးတော့ . .
ကားပေါ်က ဆင်း , ဖိနပ်ချွတ် , ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ဦးခိုက်တယ်။ ရိုရိုသေသေလေး ခံစားကြည်နူး နေကြတယ်။
"ဒီလောက် ကြည်ညိုစရာကောင်းတာ ဒီတစ်ခါပဲ တွေ့ဖူးတယ်။ ငါတို့တော့ လူဖြစ်ကျိုး နပ်သွားပြီ။”
ဟိုတယ်ကို လိုက်ပို့ပြီး ပြန်ခါနီးမှာ . .
"ဧည့်လမ်းညွှန် အိပ်ယာမဝင်ခင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ကို ရှိခိုးဖို့ မမေ့နဲ့နော်" တဲ့ သူပြောမှ တခါတလေ ဘုရားရှိခိုး ပျက်ကွက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်မိတယ်။
နောက်တနေ့မနက် ဟိုတယ် သွားကြိုတောူ့သားအမိ နှစ်ယောက်စလုံး နှုတ်ဆက်ကြတယ်။
"ဧည့်လမ်းညွှန် မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ဒီမနက် တရားထိုင် ပြီးပြီလား ?”
“ဘုရားတော့ ရှိခိုးခဲ့တယ်။ လာကြို နောက်ကျမှာ စိုးလို့ တရားမထိုင်ခဲ့ရဘူး။”
“နောက်နေ့မနက်တွေမှာ လာကြိုနောက်ကျပါစေ တရားတော့ ရအောင်ထိုင်ပါ။”
သြော် . . . လေးစားဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။
မနက်စာစားဖို့ ဖိတ်တော့ အတူဝင်စားဖြစ်တယ်။ အတုယူစရာတွေက တစ်ခုပြီးးတစ်ခု။ မနက်စာ မစားခင်မှာ အစားအသောက် ပန်းကန်လေးကို တရိုတသေ ကိုင်ပြီး . .
"ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါတယ် အရှင်ဘုရား"
ကျွန်တော်ကတော့ အရင်စားလိုက်မိလို့ မျက်နှာဘယ်သွားထားရမှန်း မသိဘူး။
“ငါတို့နိုင်ငံမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ရင် . . .မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်း၊ မင်္ဂလာရှိသော ညနေခင်း . . . လို့ ဘယ်သူမှ နှုတ်မဆက်ကြတော့ဘူး။ " တရားထိုင် ပြီးပြီလား" ပဲ မေးကြတော့ တယ်။
မွေးနေ့မနက် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဘုရားပန်းလဲ , သောက်တော်ရေချမ်းကပ် , ဆီမီးပူဇော်ပြီး အလှူခံပုံးတွေထဲ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀ စီ ထည့်ပြီး ဆုတောင်းကြတယ်။ ဆုတောင်းပုံက . .
“နောင်ဘဝမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လူလာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ပါရစေ” တဲ့။
ငှက်ကလေးတွေကို အစာကျွေးပြန်တော့ . .
“ငှက်ကလေးတွေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အစာများများ စားရပါစေ။ ဒီငှက်ဘဝ ကုန်ဆုံးပြီးရင်လည်း လူပြန်ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးတတ်သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေ။”သူတို့က ပြောသေးတယ်။
“နေ့သစ်တစ်နေ့ စတိုင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို မရှိခိုးရသေးရင် ဘာအလုပ်မှ စမလုပ်ဘူး”. .တဲ့။ ဘုရားတွေကို လှည့်ပတ်ပြတဲ့အခါမှာလည်း . .ဒီနေရာလေး ကောင်းတယ်။ ကင်မရာ နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်. . ပြောတော့
“ငါတို့ ကင်မရာ မယူလာဘူး။ မျက်စိနဲ့ဘဲ ကြည့်မယ်။”
“မေ့ကျန်ခဲ့လို့လား ?” မေးတော့
“ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု ရှိရင် တစ်ခုအတွက် စိုးရိမ်ပူပန် ရတယ်။ နှစ်ခုရှိရင် နှစ်ခုအတွက် ပူပန်ရတယ်။ ဘာမှ မယူလာတော့ ဘာအတွက်မှ စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလိုတော့ဘူး.” တဲ့။
ပြင်ဦးလွင် ရောက်လို့ . . . ."ရထားလုံး စီးကြမယ်” ဆိုတော့ . .
“မစီးဘူး။ ငါတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ။ တိရိစ္ဆာန်တွေကို သနားရမယ်။ ညှာတာရမယ်။ မဖြစ်မနေ သွားရမယ့် ခရီးဆိုမှ စီးသင့်မှ စီးမယ်။”
လမ်းတလျှောက် အလှူခံမဏ္ဏပ် တွေ့တော့ ကားပေါ်ကနေ လှမ်းပစ်ပြီး လှူခဲ့တယ်။
“လှူတယ်ဆိုရင် . . . ကားကိုရပ် , ဖြည်းဖြည်းဆင်း , ဖိနပ်ချွတ် , လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ရိုရိုသေသေ လှူရမှာပေါ့ , ခု နင့်ဟာက လှူတာနဲ့ မတူဘူး။ တိရိစ္ဆာန်ရုံထဲ ကားပတ်စီးပြီး ဆင်တွေမျောက်တွေကို အစာကြဲချကျွေးသလို ဖြစ်နေပြီ။ အခြားဘာသာဝင်တွေ မြင်ရင် အထင်သေးသွားလိမ့်မယ်။ ငါလှူပြမယ်”. . ဆိုပြီး ဖိနပ်ချွတ် လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တရိုတသေ လှူပြသွားတယ်။
အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ရှက်လွန်းလို့ ဘာစကားလုံး သုံးရမှန်း မသိတော့ဘူး။
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ထဲ ရောက်ပြန်တော့ . .
“ဧည့်လမ်းညွှန် . .ခဏလာပါဦး။”
“ဒါ ဆင်စွယ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဘီး , ဆံထိုး , ဆေးတံ , အရုပ်တွေ မဟုတ်လား ?”
“ဟုတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ .?”
“တခြားဧည့်သည်တွေ ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ မဝယ်အောင် နင်က တိုက်တွန်းရမယ်။ ပညာပေး ရမယ်။ ဒီဆင်စွယ်တွေကို ရဖို့ ဆင်တွေကို သတ်ရတာ။ ဒါကို ဝယ်ရင် ဆင်တွေကို သတ်ခိုင်းတာနဲ့ အတူတူပဲ။ မြတ်စွာဘုရား မကြိုက်ဘူး လို့ပြော။ ကြားလား ?”
ကျွန်တော် မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်တော့ပါဘူး။
ကလောသွားတဲ့ လမ်းမှာ . . .
“ဧည့်လမ်းညွှန် ငါအပေါ့ သွားချင်လို့ အိမ်သာတွေ့ရင် ရပ်ပေးဦး။”
ခြုံထူပြီး လမ်းရှင်းတဲ့ နေရာရောက်ရင် ရပ်ပေးမယ်။ လမ်းဘေးမှာ သွားလို့ရတယ်။ မြို့နဲ့ ဝေးနေသေးတယ်။
“ငါလမ်းဘေးမှာ အပေါ့မသွားဘူး။ ငါတို့အခု ရောက်နေတာ ယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံ။ လေးစားရမယ်။”
နောက်တစ်နေ့ ညနေမှာ လေယာဉ်နဲ့ ဘန်ကောက်ကို သွားကြတယ်။ အံဒီကတဆင့် အင်္ဂလန်ကို ပြန်ကြမှာပါ။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို အသွား ရွှေတိဂုံဘုရားကို အနောက်မုခ်ကနေ ဦးချကန်တော့ သွားကြတယ်။
“ရွှေတိဂုံဘုရားရေ . . .ကျွန်မတို့ ပြန်သွားကြပါပြီ။ ကျွန်မအသက်ကြီးနေလို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာဖို့ ဆိုတာ မသေခြာတော့ဘူး။ နောင်ဘဝမှာ လူဖြစ်ခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ရပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဧည့်လမ်းညွှန်နဲ့လည်း အဆွေအမျိုး ဖြစ်ချင်ပါတယ် ဘုရား။”
မျက်ရည်တွေနဲ့ စိုရွှဲနေတဲ့ အမေကို သားဖြစ်သူက ဖေးကူမပြီး ကားပေါ် ကြင်ကြင်နာနာ ခေါ်သွားတယ်။
သူတို့သားအမိ နှစ်ယောက်နဲ့ သွားခဲ့ရတဲ့ (၁၄) ရက် ခရီးဟာ ကျွမ်တော့အတွက်တော့ ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေက တစ်ပုံတစ်ပင်။ တကယ့် တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာတွေချည်းပါပဲ။
( တင်လှိုင်မြင့် - ကြေးမုံ- စာ- ၆ )